Taariikhda My Butros » 12 Guuritaanka Smart u Online Dating
12 Guuritaanka Smart u Online Dating
Last updated: Jan. 22 2020 | 5 min akhri
Koritaanka qarxa ee Internet broadband waxaa uu cadeeyay in shukaansiga online halkan waa in ay sii joogaan. Iyadoo hab nololeedka mashquul maanta, kelida badan waxa ay ogaadeen in shukaansiga online waa labada fudud, raqiisan, iyo cunaysa waqti ka yar habab shukaansi dhaqameed.
Sida hordhac ah habka cusub ee shukaansi, halkan waxaa ka mid ah dhaqaaqdo smart in la sameeyo si ay u helaan aad waayo-aragnimo dheeraad ah oo abaal-marin iyo xanuun yar:
1. QAADAN hab loo iftiimiyey: Ogow shukaansigu online waa wax ka badan nooc oo kala duwan oo hordhac. Sii isku day ah oo muddo yar oo aad u kabaan qorshahaaga guud ahaan bulshada. Ha ka Yeelina u shukaansi online aad xiriir oo kaliya in ay galmo ka soo horjeeda, haddii kale waxaad iman doontaa guud ahaan, in keli ah ama aad ugu baahan. Iyada oo la kulmay musharax jacayl u qalma waa inta badan a kulan lambarada (The Law of GPA), ogaataa in ahan sida badan dadka uma shaqeeyaan in arrimaha la. Waa maxay macnaha arrinta waa haddii uu jiro mid ka mid ah oo Fasha.
2. HA IT kaligiis SAMAYN: Ka dhigo qabad wax madaalo xiisa leh oo ay ku lug leeyihiin saaxiib iyo wada waxan u samaynaysaan shukaansi u quudhin online. Waxaad si dhakhso ah u baran kartaa adigoo is barbar qoraalada iyo maraya habka wada waqti isku mid ah. Tani waxay sidoo kale qaadan doona cadaadis off aad ah, hana idiin yeelo muuqan yar ugu baahan tahay inay ragga, oo ay u adeegaan sida difaacaa weirdo ee laga yaabo inay ka siibnaa waxa soo baxay waxaa raadinaya loners la shaqayn jiray.
3. BILOW OFF cusub JOOG cusub: Ha kasta oo caadifadeed, ma qaado galay oo aanuu cusub. Taas macnaheedu waa in aad la baabi'iyo janjeera wax inaad ka cabato, cambaaraynaynaa, dhaleeceeyo, ama waxay noqon xun oo ku saabsan shukaansi, Jacylkan, jeclahay, ama galmo ka soo horjeeda. Waxa aad ka aaminsan noqotaa hab aan la arki karin si aad u aragti weyn ugu horeysay la rajo jacayl cusub. Iyada oo shukaansi online, aad fursad u gaar ah si aad u hesho in la ogaado qofka kale iyada oo aan si dhab ah loo arko ama hore kulan. Sameyso Laanta mawqifka sida aad jeclaan lahaa dhoolla fiican in la sameeyo kulan fool-ka-fool ah.
4. Doorosho BIXINTA SITE shukaansi WANAAGSAN: Isticmaal goobaha mushaharka ugu guulaha badan. Iska ilaali xayeysiis shakhsi free kuwaas oo soo booqday by dhallinyarada, dadka is qaba, iyo dabasocdaha. Qiimaha barnaamijka waa u qalantaa baarista baxay freeloaders ah. Waxaad ku darsato karo dadaalka aad by sidoo kale helo suuqa Daaqad Misbaax ku saleysan dan gaar ah aad qabto (DateMyPet.com xayawaankaaga) ama tayo gaar ah oo aad u hantidaan (soo jeeda qowmiyadaha, waaweyn-size).
5. QOR AN NUQUL AD KU OOLKA AH LA PHOTO A GREAT: Leedahay saaxiib talented qoro si fiican u tilmaamo idinka mid ah oo gaaban tahay, macaan, iyo eegayey. Ma bixin faahfaahin aan aad u badan ama macluumaad shakhsiyeed. Xasuusato qeyb ka mid ah qarsoodiga, aad. Hubi in aad leedahay sawir sasabashada, waa in dhawaan, oo idinka mid ah oo keliya, oo dhoola ruux on wajigaaga. Qaado dhowr photos muunad oo dooro mid ka mid ah ugu wanaagsan. Haddii loo baahdo, waxaa ka mid ah dhowr sawiro ama iyaga xilliyo beddesho. Ha dhayalsan awoodda ee sawir. Xusuusnow maahmaahda Chinese in akhriya: Sawir yahay kun oo eray qiimihiisu.
6. RAAC habka shukaansi INTERNET SAFE: Isku keen 3 Waraaqihii qofkiiba. La kulan meel dadweynaha ee kafeega in hergalinta ilaa hal saac. Ma wax dib loo qorsheeyay (kulmaan saaxiib) si aadan la hadlay karaa joogi agagaarka aad u dheer. Haddii aad dareento raaxo, ku soo raaco saaxib oo u sheeg qofka aad la socoto in ay la kulmaan in ay haystaan ​​fursad bonus in uu la kulmo laba qof halkii ay ka mid. Haddii aad hesho unkidda this, ka dibna aad sii wadi karo qaabka la shukaansi caadiga ah, tago qayb Internet ka danbeeya iyo illowday.
7. HELI CLEAR ON MAXAY aadan rabin: Gacan bir ah khasaaray ama dadka aadka u halista ah. Kalsoonow dareen on Dhinaca kale iyo sirdoonka ugu dhoow ee. Haddii qofka u muuqataa wax qariib ah in si kasta oo, hubi inaad gudbin fursad ah in uu. Waxaa laga yaabaa inaad ka qaldan qofkan gaar ah, laakiin aad noqon doontaa ammaan ee mustaqbalka fog. Furayaasha Qaar ka mid ah dhaqanka la yaab leh waxaa ka mid ah: emails aad u badan inta badan, af galmada cad, comments maamula, cadho xad dhaaf ah, xeeladaha baxsanaya, oo aad u tiro badan siraha qarsoon ama wax u eg in ay iska hor imanayaan.
8. Waxa aad sameyneyso RABTO: Ay fikrad cad ah waxa aad jeceshahay in lammaane jacayl muddo-dheer marka la eego wadnaha, dabeecaddiisa, shaqsiyad, iyo biyihu. Raadi qof la isku aadinta gool xiriir, shaqsiyad habboonaanta, qiimaha core la mid ah, iyo taam hab nololeed. Ka taxaddar marka hore si ay gacan bir ah kuwo xun xun, laakiin si deg dega u raadiyo waxyaalaha wanaagsan in aad rabtid in xiriir jacayl ah. Taas ayaa kaa dhawri doona wanaagsan oo aad soo jiidasho u leeyahay dadka kale.
9. Ha u SPOOK MARKIIBA HORE: Haddii aad hesho cid la iman kara heer sare ah sida ka dheeraw lamaanahaaga jacaylka a iyaga didiyaan iska adoo waydiinaya su'aalo ay aad u badan, weydiinaya khalad ah su'aalo, qarinayo tayada, u muuqday mid aad u Masaakiinta, lahayn meelo kale oo bulshada, asxaabta, ama kooxaha. La hadal xor ah waxyaabaha aad ku, laakiin waxaa loo baahan yahay ma ku waari ama muhimadda liito aad. Ha socodka macluumaad saan caadi ah maadaama ay si dabiici ah laga soo dajiyey is dhexgalka. Ha ku dhicin dabin ee weydiinaya ama Caddayn wax macluumaad aad u badan oo aad u dhakhsaha badan ma.
10. HA been, Naftaada: Behind terminal computer ah qofka uu noqon karaa mid cajiib ah, guursan, guul, hodan, oo dhan wada cajiib ah, laakiin xaqiiqadu waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo kala duwan. Ha noqonina sida kuwa kale oo ay isticmaalaan photos jir naftooda iyo qori profiles la buunbuuniyey oo naftiisa ku saabsan. Naftaad daacad ka dibna weydii rajada aad hab xeelad leh in ay si daacad ah aad u. Haddii aanay jirin wax daacad, ma jiri karto uun midkood. Taasi waa jid ay ku bilaabi nooc kasto oo xiriir jacayl muddo-dheer.
11. Naso Kushubasho IYO qiimeyso: Shukaansi Online hoos aad xiran karaan haddii aadan taxadir. Waxay sidoo kale ka dhigi kartaa in ka yar aad aadanaha iyo ka badan gedaaman ku saabsan guur iyo galmo ka soo horjeeda. Taasi waa sababta aan u soo jeedin in aad saxiixdo oo kaliya ilaa for a 3 The Times bil ah adeega shukaansiga online hore. Ka dib markii ay 3 bilood ka weyn yahay, naso oo qiimeyso guulaha iyo Guuldarrooyin aad. Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in aad bedesho nuqul ad ama sawirkaaga. Sida kalluumaysato ah kuwa caqliga leh, laga yaabee in aad u baahan tahay in aad bedesho sed sababtoo ah nooca la abuuray oo aad u muuqdaan in ay la soo jiidanaya. Malaha waxa la joogaa wakhtigii si ay isugu dayaan site kale si loo arko haddii aad u soo jiitaan nooc oo kala duwan oo qof. Laakiin inta badan dhammaan, nasanayo kaa caawin doona inaad aad aragti dib u si aad guur online entry soo socda uu noqon doono rajo fiican oo wanaagsan.
12. Leedahay maad AMA HA IT qaban cayn kasta ha: Samee xiiso leh hawshan ama aan ka qeyb at dhan. Sida ugu dhakhsaha badan u noqdo aalo ah, jejebiyo aad isku kalsoonaanta, ama uu dareensan yahay sida jimicsi ah in niyad, joojin samaynayaan oo ay diiradda saaraan wax kale in aad noloshaada. Shukaansi Internet noqon kartaa guul u ah dad badan, laakiin waxay ku xiran tahay gaarista smart dhaqaaqdo, dayactirka aragti weyn, isagoo u dulqaata ku madax adag, iyo in caadifad ahaan diyaar marka nasiib ugu danbeyn jidkaaga ku yimaado.
Shukaansi Online waa wax ka badan hab cusub loo sameeyo hordhac ah. Samee kaliya smart dhaqaajinayaa waana iska ilaali kuwa carrab la 'si ay u sii naftaada Jid in ay is jeclaadaan. Marna ma ogaan haddii qofka soo socda waa mid aad u. Iyo in ciyaarta ee jacaylka, waxaa ka mid qaadataa oo keliya si uu u noqdo guusha nolosha. Nasiib wacan oo wuxuu ku raaxaysan safarkaaga!
5 Sababaha Maxaad Butros Milkiilayaasha Ma Winners Adduunka Dating
Sida loo sameeyo Long-Distance Relationships Work